Hindiya: Gabadh is dishay 'markii lagu caayay midabkeeda madow' - BBC News Somali
Hindiya: Gabadh is dishay 'markii lagu caayay midabkeeda madow'
Gabdho badan ayaa lagu aflagaaddeeyaa midabkooda madow awgiis
Haweeney 21 jir ah oo u dhalatay dalka Hindiya ayaa lagu soo warramay inay isku dishay sabab la xiriirta ninkeeda oo dhibaato ugu geysan jiray "midabkeeda madow ee dabiiciga ah awgiis", sida ay boolisku sheegeen.
Ciidamada booliska ee gobolka Rajasthan ayaa diiwaan galiyay kiis dacwadeed oo ka dhan ah ninkii ay xaaska u ahayd gabdhaas ka dib markii uu aabaheed u gudbiyay cabasho ku saabsan inuu ninku sabab u yahay geerida gabadha.
Saraakiisha booliska ayaa BBC-da u sheegay inaan ilaa hadda cidna loo xirin arrintaas. Ninka la eedeeyay ayaan sidoo kale wali booliska u gudbinin warbixin ku saabsan dhacdadaas.
Dad badan oo reer Hindiya ah ayaa aaminsan in dadka uu midabkoodu xoogaa cadyahay ay ka fiican yihiin ama ka sarreeyaan kuwa midabkoodu uu madow yahay.
Haweeneyda dhimatay aabaheed ayaa booliska u sheegay in seygeedu "uu mar walba si joogto ah ugu bahdili jiray midabkeeda madow ee asalka ah dartiis", taasina ay sababtay inay nafteeda disho.
Mahatma Gandhi ma wuxuu ahaa "cunsuri"?
Ma aha markii ugu horreysay ee "midabka madow" ee la isku caayo uu dalka Hindiya ka sababay inay gabdho isdilaan.
Gabadh 29 jir ah ayaa isdishay sanadkii 2014-kii ka dib markii uu ninkeeda ku caayay midabkeeda madow awgiis, sida ay boolisku sheegeen.
Sanadkii lasoo dhaafay ee 2018-kiina, gabadh 14 jir ah ayaa isdishay ka dib markii sida lagu soo warramay ay ardaydii fasalkeeda Iskuulka la dhiganeysay ku maadeysteen, kuna tilmaameen qof "foolxun", maadaama uu midabkeedu "madoobaa".
Midab kala sooca ayaa khatar weyn ku haya Hindiya
'Buufiska halista ah' ee ka jira Hindiya
Waxaa ka warramaysa Geeta Pandey, oo BBC-da uga soo warranta magaalada New Delhi
Dhacdadan musiibada ah waxay mar kale muujineysaa sida uu khatar u yahay buufiska dhinaca midabka maqaarka ee ka jira dalka Hindiya.
Gabdhaha midabkoodu uu madow yahay waxaa iyagoo aad u da' yar loo sameeyaa magacyo aflagaaddo ah. Waxaa looga maadsadaa Iskuullada iyo xitaa guryaha dhexdooda, halkaasoo mararka qaarkood xubnaha qoysaskooda ay ka cadyihiin dhinaca midabka.
Midabbada kale, sida maariinka, caddaanka iyo waliba maqaarka iftiima waa lagu jeclaadaa gabdhaha laakiin marna caay lagama dhaafo gabdhaha madoow.
Warbaahinta caanka ah waxay si joogto ah usoo qaataan sawirro la isbarbar dhigay oo laga qaaday jileyaasha iyo dadka dharka xayeysiiya.
Arrintaasna waxay gabdho badan oo madow ku dhalisay dareen ah inay jirkooda nacaan ama foolxumo isku maleeyaan.
Sharciyadu ma oggola in la muujiyo wax liddi ku ah dadka uu midabkoodu madowyahay ee aan soo jiidashada lahayn ama aan faraxsaneyn.
Laakiin sanadihii lasoo dhaafay shirkadaha wax loo xayeysiiyo waxay xushaan dadka midabkoodu uu cadyahay, waxayna muujiyaan in qof walba qofka uu ka cadyahay uu ka sii fursad fiican yahay.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa jiray ol'ole looga soo horjeeday arrintan, waxaana dadka lagu boorrinayay inay ku farxaan midabka madow.
Hase yeeshee waxaa cad in wali dadaal dheeri ah loosii baahan yahay si farriintaas loo sii ballaariyo
Ilaa inta ay taasi ka dhaceyso, midab takoorka noocan ah wuxuu sii burburin doonaa nolol badan.